トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ ROM Works
Umshini pachinko, njalo ukukhwezwa ROM. Ngakho, hlobo luni into noma ROM, ngingathanda sibheke ukuthi isebenza kanjani. Ngenxa ROM noma ukunquma nangempela ngayibamba, equkethe uhlelo, ezifana ukufinyelela kanye nokusebenza, kuba umshini, ezifana umshini umdlalo zobuchopho.
umshini pachinko jackpot uthath? uhlelo lotto okungenzeka ngokuphelele zonke izinhlobo. (Kuyinto nje theory. Awukwazi ukuphika ukuthi kungenzeka ukuthi big hit amathuba, njll Horukon is ziyaguquguquka kuye esitolo.) _ X000D_
konke etafuleni imidlalo, lapho ukuhlola umshini pachinko ukuthi Hodorikyo, kuncike ukuhlolwa , kodwa ukubuyekeza hhayi okungenzeka ephelele bamunye ukuze singathwesi idlule. Inani
kunqunywa ngemodeli ngayinye, ukucacisa kusukela izinombolo okungahleliwe, esibizwa ngokuthi i-okungenzeka ephelele. Ngakho, lokuhambisa ROM e onjani indlela, sizochaza indlela ukuthi ube big hit. Phakathi ROM, it has a count by Uhlaka esisodwa noma yikuphi. Khona-ke, lapho ifinyelela inani elithile zezinombolo, futhi ngokuphindaphindiwe ukuthi ukubuya 0.
Ethebuleni amageyimu, amabhola ukuthi wonke umuntu kwaba kwethulwa, oqala emhlabeni isithombe ukungena chucker isiqalo, e-ROM ngaleso sikhathi, ilotho wenziwa, phakathi zokukhiqiza futhi ufinyelele, noma eze off noma hit kakade uke safike isilungisiwe.
futhi ngesikhathi ilotho esilandelayo, futhi uqala ukunyakaza emuva 0, kuyinto ilotho okwamanje kwaba chucker ekuqaleni kuze uqede. Lokhu kungenxa yokuthi lezi zinto okungahleliwe like roulette ukuthi ujike, ematfuba kuba imizuzu ngisho 1 of 290, akusho ukuthi eze emhlabeni njalo turning 290 ngokushintshana. Ngo
, ukuthi kwakungeke kube big hit okungenzeka kuyadingeka, kodwa ungase ucabange, ROM phezu kwesikhathi, izozama Chikazukeyo nangempela ngayibamba, okuyinto lihlelwe umshini. Kuyinto, noma kungenzeka hit e ngemodeli ngayinye, ukuthi converges kuya big hit okungenzeka.
leyo, noma kukhona isikhathi lapho hit enkulu njalo, uma ungeke uphume Inkathi mina, ezifana ukuthi kukhona noma kukhona. Kalula akuchaze ubudlelwano phakathi ROM futhi nangempela ngayibamba, kodwa umshini pachinko okungukuthi, konke ukuphathwa ROM ihambile.
Reach hit kokubili, ilotho okwamanje lapho bengena ungacala chucker Hlobo luni umqondisi siyeza inqanyulwa. Ngakho, lapho wena ucindezela okusemandleni akho kungakhathaliseki ukuthi inkinobho ithuba, akusho ukuthi hit kungenziwa sisuswe, Angazi kuphela ukujabulela umsebenzi kuphela.
ngokuqinisekile ukufunda hit okungukuthi, awukwazi ngisho noma ubani ukuba abantu pachinko emakhazeni. Ngokuqinisekile, lokhu win isiqinisekiso, futhi ngicabanga ukuthi wakwazi ukuqonda kangcono ukuthi ekuqaleni uthwebule.
pachinko, sithanda izinto Uyi ukugembula noma labo abenza kangcono ibhizinisi. ke kuphela ongayenza, funda igagasi hit ROM, hhayi kuphela mayelana lokuthi zama hit lokho isimo.
Nokho, ingxenye Pachinka kungaba akunjalo okungenani uthole inyanga 1 million yen.